Okokuqala floribunda rose zisusiwe ekuqaleni kwekhulu leminyaka eledlule bewela polyanthas netiye rose. Ngenxa yalokhu, kuba uhlobo olusha ukuthi ngokufanele sihlanganise lonke izici ezinhle amaqembu yasekuqaleni. nakho ngempumelelo spodvig abalimi ukuba owela entsha, futhi ngenxa yalokho eziningi lazalaniswa ezifuywa. Ngo-1976, e-Oxford, the World Federation of Societies rosarian wanikeza lesi iqembu imibala igama elisemthethweni "floribunda", okusho ukuthi "izimbali". Ingase ibe khona ehlukile floribunda rose. Izinhlobonhlobo ukuthi imbali ethulwa nezibopho ukuphakama ongaphakeme azungeze 40 cm, medium - 60-80 amasentimitha ubude, ukuphakama okuyinto 1 imitha noma ngaphezulu. Ukuma lezi rose iveze imiqumbe zifane itiye. Izimbali kungaba elula, lulwimi double futhi terry nge ububanzi 4-8 amasentimitha. Ububanzi umbala omkhulu, ngisho ihlangabezana ezimthende rose floribunda. Ukutshala nokunakekela yaleli mbali ulungisiswa esihle hardiness ebusika, ukumelana nezifo futhi eside, izimbali obuningi.
Nokho, lapho enza izinqumo ngalolu hlobo rose ezikhulayo, khumbula ukuthi kuyizinto izimbali for engadini ezikhulayo nge isikhala esanele, njengoba abe ezihlabayo aluhlaza kakhulu. Buketnye yokuqhuma - lena sici esilandelayo izitshalo ezifana, ezifana rose floribunda. Ukutshala nokunakekela Kwenziwa ngesisekelo ehlathini 2-3 ngamunye 1 imitha square. Kuncike kule mfuneko unikeza isihlahla wave eziqhakaza aluhlaza izimbali isixha. Izimo zezulu yeRussia, amagagasi anjalo angaba ezintathu. Ukuze zezimbali aluhlaza njalo kuza ukuthula.
Ingasaphathwa ukuthi maqondana izitshalo ezifana, ezifana rose floribunda, betshala nokunakekela - kuba kukhathaza kakhulu. Lezi rose zingatshalwa ekhanyayo, kodwa uma ufuna uwafake izimbiza ezinkulu. Lesi simila idinga amaningi izakhi ezengeziwe emhlabathini, njengoba igagasi yokuqhuma eziningi ezivela idinga abalulekile izindleko zamandla. Yingakho lolu hlobo rose udinga ngaso sonke isikhathi wondle umquba izakhi.
Kungaba ngokuthi izitshalo kunalokho afune izinto ngenkani kwabanye ezifana rose floribunda. Ukutshala nokunakekela ngempela bafuna iphumelele ngamalengiso kuphela Ukuhlakula ukhula njalo, njengoba uthola ukhula okubi, futhi ukuthambisa luningi ngenxa yenhlabathi ngasesinqeni se imbali kufanele kube esemanzi njalo. Wabasaqalayo Rosarian futhi kufanele kukhunjulwe ukuthi lezi zitshalo ungathandi izihlahla kanzima. Bathi nje kudingeka ngezikhathi uwuthene kancane.
Naphezu kwakho konke, kuthandwa kakhulu phakathi balimi floribunda rose. Ukubuyekeza, uthambekela ekugxileni ekutheni umhlobiso okuqhubekayo, ezihlukahlukene imibala kanye namakha, imibala induduzo, hardiness okusezingeni eliphezulu futhi undemanding yokuqhathanisa. Zivame etshalwe izingadi namapaki eduze ezizungezile wabo ukudala zokuhlobisa kocingo ingaphakathi, isitshalo le flowerbeds izindawo.
Iqiniso ezikhulayo ephakama ngowokuqala indawo elikhangayo floribunda rose izitshalo, betshala nokunakekela yonke imininingwane ziba ubala. izinzuzo eziningi has le mbali, kodwa ethile cishe kuphela ukungabi ingqikithi ukunambitheka kwezinye zenyathi.
Inkukhu nge ubhontshisi oluhlaza. Ukupheka kungokwasekuqaleni futhi esihlwabusayo
Izinzuzo basalt ukwahlukanisa
Ukuhlaziywa morphological: ukuthi kusho futhi "lokho ibadla?"
Ozithandayo apula esihlahleni sawo wonke umuntu uMelba
Indlela yokwenza TNT "Maynkraft" noma isakhiwo izicupho
Indlela Hlanza insimbi esikalini futhi yini okudingeka uyenze ukuze sikala njengoba encane ngangokunokwenzeka
Orient Resort Ihhotela 4 * (Turkey / Fethiye) - incazelo, izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa